रिभ्यु गरेर शिक्षक नियुक्ति दिइने : तामाङले खडा गरे अर्को विवाद - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचाररिभ्यु गरेर शिक्षक नियुक्ति दिइने : तामाङले खडा गरे अर्को विवाद
यस्तै धाँधलीपूर्ण नियुक्ति दिइयो भने अनित थापाकालको जिटिएमा पनि पुरानै मानसिकताले हाबी देखिने निश्चित छ। खुलासापछि जिटिएलगायत विनय तामाङको नियुक्ति नियत स्पष्ट बनिसकेको छ। रिभ्यु सार्वजनिक नियुक्ति सूचीमाथि गरिने हो कि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्ति दिइने हो, तामाङको विज्ञप्तिले नै संशय उत्पन्न गरेको छ। पुरानै नियुक्ति सूचीलाई रिभ्यु गरेर संशोधन गर्ने हो कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ नियुक्ति सूची बनाइने हो, तामाङको विज्ञप्तिले उत्पन्न गरेको संशय यही हो। पुरानै सार्वजनिक नियुक्ति सूचीमाथि रिभ्यु गर्ने हो भने अब दिइने नियुक्ति सूचीमा सार्वजनिक सूचीमा देखापरेको धाँधली, भाइभतिजावाद र मनोपोलीलाई संशोधन गरिने हो त? तामाङले फेरि मुद्दालाई विवादमा तानेका छन्।
सिलगढी,4जुन
विनय तामाङले ठहर गरेका छन्, ‘केही दिन अघि सामाजिक सञ्जालमा शिक्षक-शिक्षका नियुक्तिबारे आएको सुची आधिकारिक होइन।’
सार्वजनिक सूचीमा रहेका शिक्षक-शिक्षकाहरूले नियुक्ति पत्र पाएकै छैनन्। यद्धपि तामाङले ‘शिक्षक नियुक्ति विषयमा पुनः अवलोकन (रिभ्यु ) गरेर मात्र नियुक्ति दिने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा आएको सूची आधिकारिक होइन भने फेरि किन रिभ्यु गरिने हो त? भन्ने प्रश्न उठ्नेगरी तामाङले सम्पूर्ण शिक्षक नियुक्तिको आधिकारिक प्रकिया अविलम्ब शुरू गर्ने भनेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा आएको नियुक्ति सूचीमा रहेका शिक्षक-शिक्षिकाहरूको भेरिफिकेसन समेत भइसकेको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका प्रवक्ता बीपी बजगाईँले सूची सार्वजनिक गर्दै विनय तामाङहरूले आफ्नो पार्टीका नेता, क्याडर र नेताका आफन्तहरूलाई नियुक्ति सूचीमा राखेको, योग्यहरूलाई दरकिनार गरेर पार्टीको सिफारिस्मा धेरैलाई सूचीमा पारेको खुलासा गरेपछि पहाडमा सनसनी मच्चिएको थियो।
आज तामाङले आफूहरूले मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीसित कोलकत्ताको नवान्नमा 40 मिनटसम्म वार्ता गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। जुन वार्तामा दार्जीलिङ पहाडको विविध विषय र समस्याहरूलाई लिएर कुराकानी भएको दाबीसमेत गरिएको छ।
उनको भनाइअनुसार वार्तामा राज्यका वित्त मन्त्री अमित मित्रको पनि उपस्थिति थियो।
तामाङले अब आधिकारिकरूपले र पूर्ण नियुक्ति प्रणाली अनुसरण गरेर नियुक्ति दिने त बताइसकेका छन् तर यता अघिबाटै सार्वजनिक सूचीमा परेका शिक्षक-शिक्षिकाहरूको भेरिफाइसमेत भइसकेको छ। यस्तोमा रिभ्यु गर्ने भनिए पनि सार्वजनिक सूची अनुसार नै नियुक्ति गर्न विनय तामाङहरू लागिपर्ने छाँट छ। जो नितान्तै धाँधलीपूर्ण छ। यस्तै धाँधलीपूर्ण नियुक्ति दिइयो भने अनित थापाकालको जिटिएमा पनि पुरानै मानसिकता हाबी देखिने निश्चित छ।
खुलासापछि जिटिएलगायत विनय तामाङको नियुक्ति नियत स्पष्ट बनिसकेको छ। रिभ्यु सार्वजनिक नियुक्ति सूचीमाथि गरिने हो कि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्ति दिइने हो, तामाङको विज्ञप्तिले नै संशय उत्पन्न गरेको छ।
पुरानै नियुक्ति सूचीलाई रिभ्यु गरेर संशोधन गर्ने हो कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ नियुक्ति सूची बनाइने हो, तामाङको विज्ञप्तिले उत्पन्न गरेको संशय यही हो। पुरानै सार्वजनिक नियुक्ति सूचीमाथि रिभ्यु गर्ने हो भने अब दिइने नियुक्ति सूचीमा सार्वजनिक सूचीमा देखापरेको धाँधली, भाइभतिजावाद र मनोपोलीलाई संशोधन गरिने हो त? तामाङले फेरि मुद्दालाई विवादमा तानेका छन्।
यता ममता व्यानर्जीबाट दार्जीलिङ पहाड, उत्तर बङालको विकास अनि गोर्खा जातिको चिन्हारी र उत्थानको निम्ति बचन पूरा गरिने प्रतिश्रुति पाइएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासनको मुख्य सल्लाहकार अमरसिंह राई रहने, जिटिएका नयाँ मुख्य सचिव सुरेन्द्र गुप्त रहने पनि बताइएको छ।
शिक्षा विभागका मन्त्री पार्थ च्याटर्जी सित तामाङ, गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासनका अध्यक्ष अनित थापा अनि उत्तर बङाल विकास विभागका मनोनित अध्यक्ष अमरसिंह राई माझ पहाडको शिक्षाबारे वार्ता भएको भन्दै तामाङले नियुक्तिबारे यस्तो वयान दिएका हुन्।
अब कार्यनीतिमा बद्लाउ